KIDNAPPING NIFANESISESY : Ahiana hihena ireo mpandraharaha miasa eto Madagasikara
Tato ho ato izay dia betsaka ny trangana fanafihana ireo tranom-barotra lehibe na ny fakàna an-keriny Karàna. Mitaintaina fatratra ankehitriny ireo mpandraharaha manoloana izany tsy fandriam-pahalemana izany, izay saika manerana ny Nosy. 23 mai 2017
Atahorana noho izany ny mety ho fihenan’ireo mpandraharaha raha izao no mitohy.
Raha tsiahivina aza dia mbola tsy hita popoka hatramin’izao ilay zanaka karàna atao hoe Yanish Ismael, ilay nisy naka an-keriny teny Ilafy tamin’ny alahady heriny lasa teo.
Izany hoe tsy fantatra mazava hatreto ny tena fandehan’ity raharaha fakàna an-keriny ity na ireo samy mpanam-mbola sy mpandraharaha ara-barotra ihany no mifanafika na koa tena ireo jiolahy mihitsy no manatontosa ny « kidnapping ». Manoloana ny zava-misy dia namoaka fanambaràna ilay mpahay toe-karena Ramiliarison Andriampeno, ny sabotsy lasa teo, fa « mety hampihemotra ireo mpandraharaha miditra eto amintsika ity firongatry ny tsy fandriampahalemana ity satria manjary hampiditra fatiantoka azy ireo ny fanaramana mpitandro filaminana lafo dia lafo noho ny fahatahorana ireo mpanafika.
Eo ihany koa ny tsy fahatokisan’izy ireo intsony ny mpitandro filaminana satria matetika izy ireo indray no lasa miara-miasa amin’ireo jiolahy ».
Anisan’ny hamantaran’ireo vahiny fa firenena tena mahantra ity Nosintsika raha mitohy izao, ka mbola eo am-panaovana fanadihadiana lalina ny Zandarimariam-pirenena hatramin’izao.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2443) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021